Lasa resaka politika ! | NewsMada
Lasa resaka politika !
Rehefa tsy nahazo vato araky ny nantenainy Ravalomanana teto amin’ny boriborintany enina nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany, tapa-kevitra fa hanala ny fako miavosa etsy sy eroa. Nanampy ny Samva ny kaominina ka nanome kamiao maromaro. Na izany aza mipetraka ny fanontaniana hoe fa nankaiza sahady ireo fiarabe raitra sy arifomba enina amby folo nomena ny Samva tamin’ny fomba manetriketrika no voatery nila vonjy toy izao? Ankoatra izay, narafitra mihitsy ny faritra fanariana fako satria ireo dabampako efa trananiny ka tsy mahazaka ny loto mivangongo intsony. Noho ny toe-tsaina lomorina, tsy te-hanaja ny lamina apetraka, maro ihany ireo manary fako amin’ny fotoana tsy tokony hanaovana izany. Nanjary resaka politika izy ity satria hita ho leo sy tofoka ihany ny vahoaka manoloana ny gaboraraka misy eto.
Satria tsy ny fako ihany no olana. Vao avy kely ny orana, efa maro sahady ireo faritra dibo-drano. Tsy nisy asa natao mihitsy izany hitsinjovana ny fotoam-pahavaratra izay efa fantatra mialoha fa tsy maintsy ho avy, lasa mifanome tsiny avy eo. Voalaza fa ny kaominina Antananarivo Renivohitra tsy nahazo fanampiana avy amin’ny fitondrana foibe HVM ka tsy afaka nanao na inona na inona. Fa natao aiza avokoa ny volan-ketra alohan’ny mponina isan’andro vaky izao amin’ny sehatra samihafa. Natao karaman’ny mpanolon-tsaina ao amin’ny kabinetran’ny ben’ny Tanàna sa..???
Tsy lazaina intsony ny fahasimban’ny lalana manamafy ny fitohanan’ny fifamoivoizana indrindra moa fa izao hankatoky ny fety izao. Lalana 100 metatra alaina ao anatin’ny adiny iray etsy Ankorondrano mankeo Antanimena. Azo andrefesana ny tsy fahombiazan’ny mpitantantana ny Tanàna avokoa izany. Iraha-mahita fa tsy nahavita nandamina ny tsena ihany koa ny mpitantana ny tanàna fa vao maika aza mikorontana.